Libanjwe oLundi iqola eligebenga abantu lizenza isangoma | isiZulu
Sisobishini isangoma esibanjwe emathuneni omnndeni ebusuku
Sigwetshwe iminyaka engu-18 isangoma saseMkhambathini
Ulundi - NgoLwesihlanu amaphoyisa asoLundi abambe owesilisa osolwa ngokugebenga abantu ezenza isangoma.
U-Abu Bukali Nsamba, 30, odabuka e-Uganda kuthiwa wagebenga umuntu imali engango-R48 000 ethi uzoyiphindaphinda.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Nkosie Gwala uthe uNsamba, ubezenza isangoma wayenga isisulu ethi abakubo bafuna ukusinika imali engu-R14 million, kodwa kumele simkhokhele imali engango-R150 000 ukuze asivulele izinhlanhla.
NgoLwesihlanu mhlaka-20 Okthoba isisulu sakhipha imali engango-R48 000, umsolwa waikeza isisuu iseyifu ekhiyiwe wasitshela ukuthi kuno-R75 000 phakathi. Echaza uNsamba wathi ngeke akwazi ukusinika yonke imali isisulu ngenxa yokuthi iseyifu yincane, imali ngeke yanele yonke.
Wathi enye uzobuye ayilethe.
OLUNYE UDABA:Kushaqeke abebehambele umshado kuboshwa umkhwenyana eMtuba
"Isisulu sizwe ngabantu ukuthi kudala uNsamba eqola abantu egameni lokubanika imali wase eya emaphoyiseni nale seyifu ekhiyiwe.
"Amaphoyisa aphuthume edolobheni oLundi lapho asebenzela khona lo msolwa wayalelwa ukuba ayivule iseyifu ayeyinikeze isisulu. Ngesikhathi eyivula, kubonakale ukuthi ufake imali engango-R3 200 kuphela futhi okungeyona imali yangempela," kusho uGwala.
UNsamba uvele enkantolo ngoLwesibili lapho efake khona isicelo sebheyili, kubika iZululand Observer.
Ashburton - 09:41:49 AM ROADWORKS - one lane open at Lion Park - EXPECT DELAYS Ezinye zasemigwaqeni